Lunyr စျေး - အွန်လိုင်း LUN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Lunyr (LUN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Lunyr (LUN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Lunyr ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 330 056.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Lunyr တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Lunyr များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LunyrLUN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.318LunyrLUN သို့ ယူရိုEUR€0.27LunyrLUN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.244LunyrLUN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.29LunyrLUN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.85LunyrLUN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.01LunyrLUN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč7.06LunyrLUN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.19LunyrLUN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.422LunyrLUN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.444LunyrLUN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$7.12LunyrLUN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.47LunyrLUN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.73LunyrLUN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹23.81LunyrLUN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.53.62LunyrLUN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.437LunyrLUN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.484LunyrLUN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿9.89LunyrLUN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.21LunyrLUN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥34.02LunyrLUN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩376.84LunyrLUN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦122.06LunyrLUN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽23.5LunyrLUN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴8.76
LunyrLUN သို့ BitcoinBTC0.00003 LunyrLUN သို့ EthereumETH0.000829 LunyrLUN သို့ LitecoinLTC0.00585 LunyrLUN သို့ DigitalCashDASH0.00351 LunyrLUN သို့ MoneroXMR0.00358 LunyrLUN သို့ NxtNXT24.84 LunyrLUN သို့ Ethereum ClassicETC0.0469 LunyrLUN သို့ DogecoinDOGE91.89 LunyrLUN သို့ ZCashZEC0.00387 LunyrLUN သို့ BitsharesBTS9.81 LunyrLUN သို့ DigiByteDGB10.19 LunyrLUN သို့ RippleXRP1.13 LunyrLUN သို့ BitcoinDarkBTCD0.011 LunyrLUN သို့ PeerCoinPPC1.06 LunyrLUN သို့ CraigsCoinCRAIG145.08 LunyrLUN သို့ BitstakeXBS13.58 LunyrLUN သို့ PayCoinXPY5.56 LunyrLUN သို့ ProsperCoinPRC39.95 LunyrLUN သို့ YbCoinYBC0.000171 LunyrLUN သို့ DarkKushDANK102.19 LunyrLUN သို့ GiveCoinGIVE689.67 LunyrLUN သို့ KoboCoinKOBO72.54 LunyrLUN သို့ DarkTokenDT0.293 LunyrLUN သို့ CETUS CoinCETI919.68